Mmiri na-ezo, ọ na-ezo nwamba na nkịta, ikuku na-eku ikuku agbapụtawo nche anwụ n'ime gị, ugbu a ị na-emebi. Ma ọ bụ mmiri ozuzo oge oyi ma ọ bụ mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ n'oge oyi, ị ga-achọ nche anwụ ị nwere ike ịdabere na ya iji mee ka ahụ gị kpọọ nkụ.
Ọ bụrụ n’ịdị ka ndị ọzọ, echetaghị mgbe niile ị lelee akụkọ ihu igwe. Yabụ mgbe ị na-achọ nche anwụ ọhụụ, chọọ obere, dị fechaa, ka ị nwee ike iburu ya oge niile, agbanyeghị ihu igwe dị. Umu agbogho kachasi nma emeela ka ọgịrịga na akwọ ụgbọ elu nke na-efeghari n'oké ikuku ma zere ibute ụgbọ njem DE dị njikere iburu gị. Ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyekwa teflon nke mere na ala ha na-agbacha ngwa ngwa ma ị nwere ike izere udu mmiri n'okpuru mesịa. Ihe ọhụrụ nchepụta ahụ gụnyekwara nhọrọ na-apụ apụ, n'ime ime: site na usoro a, a ga-agbakọ akụkụ ahụ mgbochi mmiri nke "mpụga" ma banye n'ime ya, na-eme ka mmiri ahụ na-abanye, pụọ na ụgbọ ala gị, ala na uwe gị. Nhọrọ ndị a agbagwo agbagọ nwekwara ike ịdabere na ha onwe ha ma ha anaghị achọ ngagharị ma ọ bụ nche anwụ.
Anyị anakọtala sọrel ndị kachasị mma iji mee ka mmiri ghara ịfụ gị n'oké mmiri ọzọ. Lelee nhọrọ dị n'okpuru iji chọta ụdị ọkacha mmasị gị - enwere ọbụna abalị nke nwere ọnya nchekwa na-eche echiche! - ma gbakwunye na azụmaahịa gị. N’oge ọzọ amụma ihu igwe na-ekwu mmiri mmiri, ị ga-eji ngwa gị ọhụụ dị njikere.
Ebumnuche anyị na SheKnows bụ inye ụmụ nwanyị ume ma gbaa ha ume, anyị na-eme ngwaahịa naanị anyị chere na ị ga-ahụ n'anya karịa ka anyị hụrụ. Biko rịba ama na ọ bụrụ na ịzụtara ihe site na ịpị njikọ njikọ na akụkọ a, anyị nwere ike ịnweta obere ọrụ na-ere ere, na onye na-ere ahịa nwere ike ịnweta ụfọdụ nyocha akaụntụ nyocha.